I-80 + EPHEZULU YOKHAKHAYI KUNYE NE-ROSE TATTOO IDEAS- [2021 ISIKHOKELO SOKUPHEFUMLELA] - UHLOBO
I-80 + ephezulu yoKhakhayi kunye ne-Rose Tattoo Ideas- [2021 Isikhokelo sokuphefumlela]
Ukhakhayi kunye neetattoos ze-rose meld ezimbini zeempawu zemveli ezithandwayo. Intyatyambo entle yentyatyambo ngokuchasene nembonakalo yamathambo efanekisela ukufa kunye nengozi.
Ukakayi kwaye iphakame njengengcamango ye tattoo ibonisa ubumbano- izikhundla ezichaseneyo polar ngaphakathi kwengcinga enikiweyo. Ubomi xa kuthelekiswa nokufa. Impilo xa kuthelekiswa nokubola. Kulungile xa kuthelekiswa nobubi. Ukubhiyozela ukusukela ekuzalweni kwento entsha njengeentshaba okanye imiqobo yoyisiwe okanye yaphoswa ecaleni.
Ingqayi ye-skull rose kukuvuma okukhulu ukuba ngomzabalazo kunye nokuphela kwayo okungenakuphepheka kuza ngobuhle obukhulu.
Unokufaka uluhlu lokakayi kwaye uphakamise izimvo kwisiqwengana sakho sokuphefumla se tattoo. Unokudibanisa i-tattoo yeswekile yaseMexico ngokwesiko kunye ne-English Tudor rose ukuhlonipha izihlobo zakho. Phosa i-rose ebomvu ebomvu phakathi kwe-inki emnyama enzima Ukhakhayi lwe tattoo yakho yomkhono olandelayo ukothusa nokudandatheka.
Izinketho azipheli. Ukhetho lolwakho. Funda ngokufumana ukhakhayi oluhle kunye nee-tattoos zeeroses ezinokuthi zenze uyilo lwakho lwe tattoo olulandelayo.
Bona ngakumbi malunga - Eyona Tatoo iphambili yama-75 + yeRose Tattoos ngo-2020
Bona ngakumbi malunga - I-Ultimate 145+ Iingcamango zeTattoo zeSkull
1. Ukhakhayi kunye neRose Arm Tattoo
Umthombo: @derekroyaltattooer nge-Instagram
Umthombo: @tattoorupa nge-Instagram
Umthombo: @stpetetattoo nge-Instagram
Umthombo: @inkbybabalon nge-Instagram
Umthombo: @katecrane nge-Instagram
Umthombo: @mikejonestat nge-Instagram
Umthombo: @saamthomaas nge-Instagram
Umthombo: @melbootstattoo nge-Instagram
Umthombo: @rui_tattooist nge-Instagram
Umthombo: @ mara.brito_ nge-Instagram
Umthombo: @bendeadtattoos nge-Instagram
Ukumelwa kweenjongo ezimbini eziphikisanayo sisiseko esiphambili kubugcisa bekakayi benyuka itattoo. Ezi tattoos zahluke kakhulu-ukusuka kwiitatts ezincinci ukuya kwimikhono epheleleyo-vumela igcisa ngalinye kumvambo ithuba lokusebenzisa izinto ezahlukeneyo.
izimvo zethayile yeshawari yokuhlambela
Baxela ukhakhayi olumele ubomi kunye / okanye ukufa, kunye neroses efuzisela ubuhle, uthando kunye namandla. Kukho indawo eninzi yokubonakalisa ubuqu kwikakayi kunye nokuyilwa kwe tattoo, ukuba isitayile ngasinye okanye ubuchule bokusetyenziswa bunokusetyenziswa ngempumelelo.
Le mizekelo ikhazimla ngokufanayo - kukho imveli kunye ne isikolo esidala uyilo, ii-tatoos zomgca ezilula kodwa ezibukhali, i-inki emnyama emnyama nengwevu, okanye iChicano yekrele leswekile.
2. Ukhakhayi kunye neRose Forearm Tattoos
Umthombo: @staci_marie_tattoos nge-Instagram
Umthombo: @ tattoos_by_sam99 nge-Instagram
Umthombo: @mazza_tattoo nge-Instagram
Umthombo: @jakehusbands nge-Instagram
Umthombo: @mikephillo nge-Instagram
Ingalo engaphambili ihlala yenye yezona ndawo zidumileyo zibekwa ngeinki. Le mizekelo yokakayi ebhalwe kakuhle kunye neentyatyambo ubungqina bokuba kutheni. Ayizukukhetha kuphela ukubonisa ukakayi kwaye yenyuka yodwa, kodwa umzekeliso ngamnye usebenzisa usetyenziso lobuchwephesha.
Ukusetyenziswa kweepatheni zokwakha, imibala ye-aksenti- jonga i-watercolor engalunganga-kunye nokucaca kumgca wokusebenza kunceda iipateni zokuma njengezona ziqwenga zomzimba ziphambili.
3. Ukhakhayi kunye neRose Chest Tattoos
Umthombo: @ reneglez78 nge-Instagram
Umthombo: @kev_bradford nge-Instagram
Umthombo: @ghostinktattoostudio nge-Instagram
Umthombo: @ tattoos.by.tank nge-Instagram
Ngokwenene ndimba umahluko kwisitayile se tattoo ezi iziqwenga zesifuba esipheleleyo bonisa ukwenza ingxelo ebhaliweyo yesibindi. Inkolelo ephambili kwiliso leTattoo Providence kukuba uThixo ubona konke-ukusetyenziswa kweliso eliluhlaza kulo mzekelo kubekwe kakuhle ngokuchasene nobomi nokufa.
Ukhakhayi lweswekile lwaseMexico, okanye iCalavera, ngokwesiko kuthetha ukumela umntu obathandayo oswelekileyo kwi-Traditional Dia De Los Muertos. Kwinkcubeko ye tattoo yangoku bakwathatha ukusweleka komceli mngeni kunye nesiqalo esitsha. Umbala o-orenji ovuthayo wentyatyambo nganye ye-rose uyamangalisa ngokuchasene nekhakhayi elinzima lesithunzi somnye umvambo omtsha. I tattoo yewotshi, ngokungathandabuzekiyo, ibonisa ixesha.
4. Ukhakhayi kunye neRose Leg Tattoo Style
Umthombo: @ spitart210 nge-Instagram
Umthombo: @johastietattoo nge-Instagram
Umthombo: @skin_bandits nge-Instagram
Umthombo: @punkperro nge-Instagram
tattoo encinci yamaphiko ngasemva
Umthombo: @dwayne_smith_tattoos nge-Instagram
Umthombo: @rhodestattoo nge-Instagram
Umthombo: @inchiostrotattoostudio nge-Instagram
Umthombo: @james_electriczombie nge-Instagram
Ukuphila ngoku kwanamhlanje ukufa kuza kuthi sonke. Ubomi nokufa. Ubuhle, amandla, kunye nokuphela okungaphephekiyo. Umzabalazo ongunaphakade phakathi kokulungileyo nobumnyama. Ukhakhayi kunye neetattoos ze-rose azikaze zichazwe njengezingenantlonelo. Ezi tatto zomlenze zizimeleyo ezizimeleyo ezibonisa iintlobo ezahlukeneyo zokwenza kunye noyilo.
Ndiyayithanda intyatyambo ebomvu ekhula ithambo lokakayi, okanye ulungelelwaniso olumangalisayo lwe-inki emnyama. Umzekelo wokugqibela ubhekisa ngqo kwimemento mori - into egcinwe njengesikhumbuzo sokungaphepheki kokufa - kodwa ingxabano inokwenziwa ngokuqinisekileyo ukuba zonke ii-tatoos ezikolu luhlu ziyimemorido mori tattoo art.
5. Ikhakhayi kunye neRose Neck Tattoos
Umthombo: @katclelandart nge-Instagram
Umthombo: @sr_kalaca nge-Instagram
Ukhakhayi kunye neetattoos rose ziyeyona nto iphambili kubugcisa baseMelika baseMelika ukusukela ngaphambi kokuba kubekho oomatshini bokubhala. Njengokuthandwa kwe tattoo ngokubanzi, i-intanethi, kunye nokwabelana ngenkcubeko ye-inki jikelele kuye kwanda, ukhetho kuyilo lwe tattoo, ukubekwa, kunye nokudityaniswa kwesimboli kuye kwanda nayo.
Iitattoo zeentamo ngoku zibekwa kwindawo eyandayo yabathandi bobugcisa bomzimba, ngelixa elidlulileyo yayilelabo banendawo encinci, okanye imvukelo nokwahlukana. Le mizekelo isebenzisa eyomeleleyo Imveli yaseMelika Izinto ngombala kunye nomnyama onzima.
Ukuba ungenamava kwaye ujonge ukwenza i-inki enkulu yentamo, mhlawumbi ukuthatha uvavanyo oluqhutywa ngetattoo yethutyana kuya kuba ngumbono olungileyo njengoko kuqinisekisiwe ukutshintsha ukuqonda, hayi wena kuphela, kodwa nengqokelela yakho ye-inki. Ngaba uyayonwabela le ngqayi kunye nemibono ye tattoo ephakanyisiweyo?
Ukufumana uyilo lwekrele ngakumbi cofa kwiikhonkco ezingezantsi kwiigalari ezikhuthazayo ezingezantsi:
Uyilo lweTattoo engama-60 eBadass
Iingcamango eziphezulu ze-43 ze-Skull Tattoo
IiTattoos ezingama-50 zeS 3D
Uyilo lweTatoo eyi-100 yeShukela
Iingcamango eziphezulu ze-77 zeSkull
6. Ukhakhayi oluMnyama kunye Grey kunye neeRattoos
Umthombo: @alicehopetattoo nge-Instagram
Umthombo: @frankball nge-Instagram
Umthombo: @hectormorenotattoo nge-Instagram
Umthombo: @gdvillalon nge-Instagram
Umthombo: @smckinn nge-Instagram
Umthombo: @nemanja_kurin nge-Instagram
Umthombo: @ blackrose.tattoos nge-Instagram
Umthombo: @liquorandink nge-Instagram
Umthombo: @rossclarktattoos nge-Instagram
Umthombo: @izzytattoocurran nge-Instagram
Umthombo: @wilkinschristopher nge-Instagram
Umthombo: @kylerbuchmeiereart nge-Instagram
Umthombo: @ vastago13_tattoo nge-Instagram
Uyilo lomzobo wesizwe kwiingalo
Umthombo: @hollywilcoxtattoo nge-Instagram
Umthombo: @chrtattoo nge-Instagram
Umthombo: @bodyartistsd nge-Instagram
Umthombo: @tattoosbytashana nge-Instagram
Umthombo: @chaostattoos nge-Instagram
Le mizekelo ibonisa uluhlu lobukhazikhazi obunokwenziwa mnyama kunye negrey tattoo xa kugxininiswa umbala kuthathwe kwisiqwenga somzimba.
Njengomculi we tattoo oqeqeshiweyo, ukuba awukwazi ukubethelela ukakayi olumnyama nolungwevu okanye uvuke umvambo emva koko uyakube ukhangela umsebenzi omtsha ukuphela kweveki yakho yokuqala.
Ubungqingqwa bomgca, ukusetyenziswa kwesithuba esingalunganga, ukuthambeka kwethambeka, kunye nomgca wobuchwephesha zizinto ezithile ezahlulahlula i-tattoo entle enje ngezi ezivela kwimiboniso engaphezulu.
7. Umbala woKakayi kunye neRose Tattoos
Umthombo: @lucky_tatts nge-Instagram
Umthombo: @toni_beat nge-Instagram
Umthombo: @ tatasaurus41 nge-Instagram
Umthombo: @ realms.xo nge-Instagram
Umthombo: @ druluv02 nge-Instagram
Umthombo: @tattoos_by_scott nge-Instagram
Kutheni le nto ukuba neroses ebomvu kunye nokonakala kwe-esile xa umzimba wakho uyi-canvas yakho? Khetha imibala ofuna ukuyila iiroses kunye neeattoos ezintle zokhakhayi. Le mizekelo inemibala isusela kugxilwe kumbala wemveli, ukuya kwizikimu zemibala kunye ne-anatomy engafumanekiyo kuzo naziphi na iincwadi.
Uluhlu ngombala kunye nolwandlalo lokwahluka kubangela ukubonakala okwahlukileyo okwahlukileyo - umbala ococekileyo, ococekileyo wombala wamaza ubonakala wahlukile, kodwa awoyiki kangako kunokwakheka ngokupheleleyo, umda wepeyinti yaseMelika okanye uyilo lokakayi lweelekese.
8. Ukhakhayi lwabasetyhini kunye neRose Tattoos
Umthombo: @ pandemonic.hyperblast nge-Instagram
Umthombo: @ coal1977 nge-Instagram
Umthombo: @ haze.tattoo nge-Instagram
Umthombo: @danirosetattoo nge-Instagram
Iitattoos ezibandakanya zombini ukakayi kunye neroses zihlala zibonisa umahluko wobomi nokufa, okanye ubuhle nokubola. Yisihloko sendalo iphela ukuba kanye phezu kwexesha bekuya kugcinwa kwi tattoo yamadoda. Olu luvo lwakudala lendoda nebhinqa luye lwasuswa njengoko ubukhomokazi obuphefumlelweyo bekakayi kudityaniswa iitattoos ngaphezulu kokubonisa.
Ngokwesiko olu hlobo lwe tattoo lwaluya kuthetha ukuba izandla zinzima, imigca eshinyeneyo, kunye nobumnyama kuphela. Ezi tattoo ziyilo zibonisa ukakayi kwaye zavela ngeendlela ezahlukeneyo, zisebenzisa umbala obuthathaka kunye nomxholo weentyatyambo ukugxininisa ubumbano phakathi kokufa nobuhle.
9. Ukhakhayi lweMveli kunye neRose Tattoos
Umthombo: @tattoosbyaaronsmith nge-Instagram
Umthombo: @ mr.inkwells nge-Instagram
ungayisebenzisa i-neosporin kwiitattoo
Umthombo: @ciro_cali_tattooer nge-Instagram
Umthombo: @ vontrapp.tattoo nge-Instagram
Umthombo: @exul_tattooer nge-Instagram
Umthombo: @edtattoos nge-Instagram
Umthombo: @prophesaink nge-Instagram
Umthombo: @box_art nge-Instagram
Uyilo lwekrele ngokwesiko lumele ukufa okanye ukubola kodwa linokuba nezinye iintsingiselo, kubandakanya njengophawu lobomi. Kwinkcubeko engekho mthethweni kunye neyasentolongweni inki yokhakhayi kukuvukela enyameni, ukubuyela emva kwixesha apho ukakayi kunye neeflegi ze-crossbones zabonwa phezulu kwaye zathumela uloyiko ngokuhamba ngomzimba womatiloshe.
Irose, ukakayi, kunye nekrele (elithetha ubukhalipha, inkumbulo kunye nokukhuselwa) ziya kuhlala zingumbindi kumvambo waseMelika, kunye nokuvela kwawo Neo yemveli kunye nenkuthazo entsha yomtshangatshangiso.
10. Ukhakhayi lokwenyani kunye neRose Tattoos
Umthombo: @restlesssoulcustomtattoo nge-Instagram
Umthombo: @phattgerman nge-Instagram
Umthombo: @ryan__tandy nge-Instagram
Umthombo: @i_am_blackwood nge-Instagram
Umthombo: @kurieltattoos nge-Instagram
Umthombo: @nikosrustyneedle nge-Instagram
Umthombo: @davey_darkness nge-Instagram
Umthombo: @joelmorley_tattoo nge-Instagram
Irose luphawu phantse lothando jikelele. Ngokwe-Aitken-Smith's Tattoo Dictionary i-rose iyaqhubeka nokutolika okungumfuziselo wenguqu, ubugqi nokukhanya.
Le mizekelo yenza umsebenzi omangalisayo ugxile kubuhle be-rose ngokuchaseneyo nekhakhayi. Endaweni yokusebenzisa isimboli yefantasy okanye ngaphezulu kombala ophezulu kunye ne-shading gradients, bakhetha ukutolikwa okuyinyani okubonakala ngathi banokuvela kwiialbham zeefoto, umzobo okanye iincwadi zezifundo.
Ubungcali obubandakanyekayo ekusebenziseni izinto zobugcisa ezinezakhono- qaphela ukuthunyelwa okuqaqambileyo kwezinto ezinje ngenaliti entle, indawo engalunganga, umzobo kunye ne-inki emhlophe-ngokuchanekileyo kungathabatha ixesha lokuphila lomsebenzi kwisitudiyo se tattoo.
11. Ikhakhayi elincinci leRose Tattoos
Umthombo: @mrmercado nge-Instagram
Umthombo: @ k.uptontattoos nge-Instagram
Umthombo: @whitewitchbodyart nge-Instagram
Umthombo: @rojo_izzy nge-Instagram
Umthombo: @tarahhoran nge-Instagram
Umthombo: @czack_tattoo nge-Instagram
Umthombo: @ink_bat_ nge-Instagram
Akunyanzelekanga ukuba ube mkhulu ukuze ube ngumvambo we tattoo! Iitattoos ezincinci ezinekhakhayi kunye neentyatyambo zinzima kakhulu - kwimeko yeesile elibi elinye iitoti zeenaliti ngaphezulu, nangaphezulu koko- kunemisebenzi emikhulu. Iimpawu ze-skull ezintle zilungelelanisa iinkalo ezincinci ngokuqwalasela iinkcukacha ezintle, umbala olinganiselayo kunye ne-shading ebeka ingcamango yomculi we tattoo kunye nokuzibophezela ekufumaneni izinto ezincinci ngokufanelekileyo, kuvavanyo.
Ukhakhayi kunye neRose Tattoo FAQs
Iyintoni intsingiselo yokakayi kunye ne-tattoo yomthi?
Xa isetyenziswe kunye kubugcisa bomzimba ukakayi kunye ne-tattoo evuselelweyo ibonisa ubumbano, obonisa umzabalazo phakathi kobomi nokufa, umahluko phakathi kokulungileyo nokubi, ibhalansi phakathi kokuhle nokubi.
Ithetha ntoni itattoo rose?
Irose luphawu phantse lwendawo yonke lothando kuyilo lwetattoos. Ngokwe-Aitken-Smith's Tattoo Dictionary le ntyatyambo ikwaquka ukutolikwa okungumfuziselo wenguqu, ubugqi nokukhanya.
Ifuzisela ntoni ithambo lokakayi?
Uyilo lwe-skull tattoo ngokwesiko lumele ukufa okanye ukubola kodwa lunokuba nezinye iintsingiselo, kubandakanya njengophawu olubonakalayo lwemvukelo kunye nokuzihlukanisa, okanye njengophawu lobomi. Ngaba uyonwabele le mikhono ye-skull rose tattoo?
Ukuyila ngakumbi i-roses tattoo okanye i-classic tattoos zokuphefumlelwa cofa kwiikhonkco ezingezantsi:
IiTattoos ezingama-73 eziMnyama eziPhezulu
Iidrafti ezingama-50 zeBadass Rose
Uyilo lweTatoo yemveli
Iingcamango ezingama-90 zeRose Tattoo
I-Tattoo yeentyatyambo eziPhambili ezingama-35
Uyilo lweTatoo ephezulu
I-Tattoo yentliziyo yesiNtu
iisuti eziluhlaza kunye nezihlangu ezimnyama
imibuzo engama-21 yokubuza intombazana
iiTattoo ezihamba nee roses
yeyiphi imibala ehamba nezihlangu ezimdaka
imifanekiso eyakhiwe kwiibhokisi zeencwadi
iinwele ezimfutshane zamadoda zeenwele ezingqindilili